Farmaajo Qaabkee buu ula dhaqmi doona Shabab Maxeyse QM ka tir…… | MUQDISHO TV|
Farmaajo Qaabkee buu ula dhaqmi doona Shabab Maxeyse QM ka tir……
Kooxda ALShabaab ayaa ka faa’ideysan weysay cafis uu madaxweynah DFS ufidiyay hadii ay dagaalka kasoo laabtaan isla markaana ay dowladu daryeeli doonto.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa iclaamiyay dagaal ka dhan ah kooxda AlShabaab isagoo tilmaamay ineysan diyaar u aheyn iney ajaanib iyo dad dano shisheye wada ay kasii dagaalamaan Soomaaliya
Inkastoo, madaxweyne Farmaajo laga sugayo inuu ka dhabeeyo balantiisii aheyd in labo sano AlShabaab guud ahaan Soomaaliya laga saaro, hadana kooxda AlShabaab ayaa wali fulineysa weeraro badan oo shacab lagu laayay.
Ergayga gaarka ah ee QM uqaabilsan Arimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay iney adag tahay in kooxda AlShabaab ay ka jawaabaan oo ay ogolaadaan cafiskii madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Keating ayaa sheegay in xalka ugu dambeeya ee AlShabaab looga adkaanayo inuusan aheyn in loogu baaqo iney dagaalka joojiyaan.
“Uma maleeynayo in cafiskaas kaligiis uu shaqeeynayo,waa howl ka badan in istiraatijiyad la isticmaalo,ma dooneyno in dhammaantiin aad ku dhimataan fikirka cadowga” ayuu yiri Keating.
“Cafiska waa qeeyb kamid ah wadahadalkaas iyo dagaalka,balse waxaad sidoo kale u baahantahay dagaal gaar ahaan hadii ay isticmaalayaan rabshado si ay ugu hormariyaan ujeedooyinkooda siyaasadeed” ayuu yiri Keating.
Kooxda AlShabaab ayaa dhawaan dishay mid kamid ah saraakiishooda sar sare kaas oo ay uga shakiyeen inuu dhanka dowladda kusii jeedo, taas ayaana muujineysa sida aysan diyaar ugu aheyn iney dhagaystaan baaqa dowladda
Ra’iisul Wasaaraha Uk ayaa Shirkii London ee arrimaha Somalia ka sheegtay in Al-Shabaab ay laba jibaartay tirada weerarrada ay ka geeysato magaalada Muqdisho.
Si kastaba, Xeel dheerayaasha siyaasadda ayaa aaminsan in Al-Shabaab ay ka koobantahay xubno isugu jira, Dhexdhexaad iyo dhallinyaro nugul kuwaas oo ay kooxda xagjir ka dhigtay iyo sidoo kale kuwo ay ka go’antahay mabda’ Jihaadka.
Dowladihii hore ayaa isku dayay inay wadahadal la furan Al-Shabaab,madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka madaxweyne ka ahaa lagasoo bilaabo sanadkii 2012-kii ilaa doorashadii Farmaajo uu ku guuleeystay bishii February ayaa wargeeyska Newsweek u sheegay bishii April in mitidiinta darajada hoose ee Al-Shabaab ay ka faa’ideeysteen barnaamij cafis ah uu u fidiyay maamulkiisa,balse wadahadallo lala galo xubanaha sar sare ee Al-Shabaab aysan macquul ahayn sababo la xiriira in qaar badan oo iyaga kamid ah ay dowladda Mareykanka u aragto argagixiso caalami ah.
“Halkaa marka ay marayso mar walbo waxaa jira wadahadal siyaasadeed oo caadi ah oo ay tahay in lala yeesho dagaalyahanada daacada u ah kooxda iyadoo rajo laga qabo in taasi loo isticmaalo kala jajabinta kooxda –laakiin ilama ahan iminka ineynu si uun ugu dhawnahay gaarida hadafkaasi” ayuu yiri Michael Keating.
Keating ayaa xusay si loo adkeeyo ammaanka, dowladda Somalia ay u baahantahay inay wax kaqabato waxyaabaha awooda u siinaya inay soo laba kacleeyaan Al-Shabaab.
“Dib u dhaca waxaa ku jira marnaanshaha sharciyadeed,iyo marnaanshaha adeegyada aasaasiga ah,ciidamada iyo booliiska oo aanan mushaaraadkooda la siinin,taas waxay ku qasabtay inay noqdaan dad musuq maasuq badan iyo inay haleeyaan dowladda” ayuu yiri Keating.
Waxa uu intaas ku daray inay tahay in badal fiican loo soo bandhigo kuwa diiday xiriirka ay la lahaayeen Al-Shabaab kana faa’ideeystay cafiska.
“Sidee ugu qancin kartaa in ay kawada baxaan Al-Shabaab iyagoo og in hadii ay ka baxaan aanan la cafineeyn, dib uguma laaban kartid weey ku dilayaan,sidaa darted ka bixitaanka Al-Shabaab waa tallaabo weeyn” ayuu yiri Keating.
Keating ayaa sheegay in iyadoo xaaladda siyaasadeed ee Somalia ay soo hagaageyso hadana dhibaato weeyn ay heeysato dadweynaha.
Awooda AlShabaab ay ku dagaalami karaan hadii ay ciidamada dowladda duulaan bilaabaan ayay dad badan shaki gelinayaan maadaama mudooyinkii dambe ay ku koobnaayeen oo kaliya iney qaraxyo fuliyaan.